Nosy Saona, ny tsy fantatra amin'ny Repoblika Dominikana | Vaovao momba ny dia
Nosy Saona, ny tsy fantatra amin'ny Repoblika Dominikanina
Maria | | America, Repoblika Dominikana
Any amin'ny atsimo atsinanan'ny Repoblika Dominikanina i Isla Saona dia iray amin'ireo nosy lehibe indrindra ary iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto amin'ny firenena. Any amin'ny faritanin'i La Romana no misy azy ary ampahany amin'ny Parque Nacional del Este manitatra 110 kilometatra toradroa. Anisan'ny valan-javaboary izy, mitahiry ny mampiavaka ny paradisa tropikaly: zavamaniry mampientanentana sy hafakely, biby isan-karazany, kilaometatra amoron-dranomasina fotsifotsy ary rano madio.
Tsy mahagaga, araka izany, fa iray amin'ireo toerana malaza indrindra hitsidihana ireo izay manao vakansy any amin'ny Repoblika Dominikanina.
Avy eo dia hianarantsika bebe kokoa momba ity nosy Dominikana tsara tarehy ity sy ny zavatra azo atao mandritra ny fitsangatsanganana mankany Isla Saona.
1 Ahoana ny fomba handehanana any Isla Saona?
2 Inona no hatao any Isla Saona?
3 Aiza no hisakafoanana any Isla Saona?
4 Toerana mahaliana hafa any amin'ny Repoblika Dominikanina
4.2 Saikinosy Pedernales
Ahoana ny fomba handehanana any Isla Saona?
Ny fitsangatsanganana any Isla Saona dia iray amin'ireo hetsika be mpividy indrindra ho an'ny trano fandraisam-bahiny any amin'ny Repoblika Dominikanina. Raha jerena ny maha-zaridaina voajanahary azy, voaro amin'ny fomba ofisialy ity toerana ity ary noho izany dia tsy manana trano eo amoron'ny morontsiraka izay ahafahanao mankafy ny natiora mbola tsy simba ary maka sary mahatalanjona.
Raha te hanao fitsangatsanganana any Isla Saona dia mila mankany Bayahibe ianao, tanàna iray izay hiaingan'ny catamarans sy ny sambo izay hiainga ho an'ny nosy. Na izany aza, ny toeram-pialantsasatra ao Playa Bávaro na Punta Cana dia manome io fitsangantsanganana io ihany koa, na dia azo atao drafitra mivantana avy any Santo Domingo aza izany. Ny dia maharitra adiny telo eo ho eo avy eo La Romana.
Inona no hatao any Isla Saona?
Ny zava-mahasarika mpizahatany eto amin'ny nosy dia ny endriny sy ny natiorany, toy ny dobo voajanahary lehibe indrindra eto an-tany izay eo afovoan'ny ranomasina 400 metatra miala ny morontsiraka. Toerana tonga lafatra hisitrika sy handroana satria zara raha mahatratra iray metatra ny halaliny.
Izy io koa dia miavaka amin'ireo vatoharan-dranomasina sy ny moron-dranomasina tsy misy fiafarany, mampiavaka ny fasika fotsy tsara sy ny rano madio toy ny kristaly izay mampiseho loko manga samy hafa miaraka amin'ny lanitra sy ny masoandro any Karaiba. Ato amin'ireny rano ireny dia ahitantsika karazan-dranomasina toy ny sokatra, trondro hafakely ary trondro kintana.
Ireo karazana hafa izay hita amin'ny Isla Saona dia vorona amin'ny karazany maro: gulls, roosters, boloky, goaika, partridges, vaguazas ary voromailala dia.
Etsy andaniny, be vato i Isla Saona ary manana lava-bato sy grottos marobe any amin'ny faritra avaratra andrefana, faritra iray tena mahaliana noho ny habetsaky ny reliky ny vazimba teratany hita tao. Ny morontsiraka dia ambany sisiny feno vatolampy ary eo no misy ny zoron'ilay nosy manana haavo kely ambonin'ny haabon'ny ranomasina, fantatra amin'ny anarana hoe Punta Roca.
Aiza no hisakafoanana any Isla Saona?
Mponina 1.200 XNUMX eo ho eo monja no monina ao amin'ny Nosy Saona, manokana ao an-tanànan'i Mano Juan sy ao amin'ny fipetrahana Catuano. Trano bongo vita amin'ny rofia sy zavamaniry no onenan'izy ireo, satria tsy avela hanorina any izy ireo ary ny asan'izy ireo no fizahan-tany sy jono.
Amin'ny maha-trano fisakafoanana azy, ao Isla Saona dia misy tranokely iray izay efitra fandraisam-bahiny hisakafoanana ireo mpizahatany izay mitsangatsangana ary toerana fisakafoanana misy lovia voanio sy trondro vaovao no atolotra.
Toerana mahaliana hafa any amin'ny Repoblika Dominikanina
Punta Cana dia iray amin'ny toerana tsara indrindra any Karaiba amin'ny lafiny kalitao / vidiny atolotry ny trano fandraisam-bahiny mahavariana rehetra ao anatin'ny toerana paradisa. Mandritra ny roa na roa herinandro, mpizahatany mankafy ny morontsiraka tsara indrindra any Karaiba eo anelanelan'ny hetsika ivelany sy ny cocktails matsiro.
Ao amin'ny Saikinosin'i Pedernales ianao dia hahita ny sasany amin'ireo manintona voajanahary mahaliana indrindra hita mandritra ny fialantsasatra any amin'ny Repoblika Dominikanina. Ohatra tsara amin'izany ny Jaragua National Park, ny moron-dranomasin'i Bahía de las Águilas, ny ala rahona Cachoté, ny farihy masira Oviedo ary ny valan-javaboary Sierra de Bahoruco, mety amin'ny fijerin'ny vorona.
Anisan'ireo zavatra tokony hatao any amin'ny Repoblika Dominikanina ianao manana ny fiakarana amin'ny tampony avo indrindra amin'ny Antilles: Pico Duarte, ny fomba fijery tsara indrindra ao amin'ny firenena izay misy 3.087 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina.
Izy io no kintan'ny Cordillera Central, ilay faribohitra an-tendrombohitra lehibe any amin'ny Repoblika Dominikanina misy 250 kilometatra ny fanitarana, na dia voahodidin'ny tampon-tampona avo hafa toa an'i Pico del Barranco, Pelona Grande, Pico del Yaque ary Pelona Chica aza izy.
Ireo tia an-tongotra dia hahita amin'ny fiakarana mankany Pico Duarte ny iray amin'ireo traikefa tsara indrindra azon'izy ireo hitranga ao amin'ny firenena Karaiba. Ity lalana ity dia maharitra telo andro amin'ny alàlan'ny tanimboly ary mandritra ny dia mandry ao anaty fialofana ianao mandra-pahatonganao any an-tampony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Nosy Saona, ny tsy fantatra amin'ny Repoblika Dominikanina
Saona dia tsy fantatra. Misy tolotra an-tapitrisany maro hatao, ary koa nohazavaina ao anatin'ilay lahatsoratra. Sary kely lohateny kely azafady. ?